Sheekh Xasan Daahir Aweys oo xilligii maxkamadaha islaamiga booqasho ku tagey magaalada Dhuusamareeb ayaa kutub caqiidada islaamka ka hadlaysa u qaybiyey culimo suufiyo ah, wuxuuna ku yiri soo akhriya oo wixii khalad idiin la muuqda aynu isla aragno. Culimadii kutubtii ayay soo akhriyeen, ka dibna waxay ku dheheen kutubtaan wax qalad ah kuma aanaan arag. Ujeeddadiisu waxay ahayd inuu culimadaan tuso...
Wasiirka Gaashaandhigga iyo Taliska Ciidamadda X.D.S oo ka Tacsiyeynaya Geeridii ku timid Marxuum C/qaadir Xaaji Maxamed “Masalle” Muqdisho, June 26, 2015….Wasiirka Gaashaandhigga Soomaaliya Gen. C/qaadir Sheekh Cali Diini iyo Taliska Ciidamadda X.D.S, ayaa tacsi tiiraanyo leh u diraya dhammaan qoyska,qaraabadii iyo guud ahaan ummada Soomaaliyeed ee uu ka geeriyooday allaha u naxariistee Marxuum...
Waxaad dhowaan saxaafada ka maqasheen ama ka akhrideen in ay midoobeen shirkadaha diyaaradaha Daalo iyo Juba taasoo u noqon karta horumar shacabka Soomaaliyeed iyo shirkadaha laftooda ama noqon karta mid iyaga keliya dan u ah isla markaasna shacabka ku noqon karta dhibaato hor leh. Aduunka waxaa kajira Antitrust Law oo ah sharci lagu ilaaliyo jiritaanka tartanka ganacsiga iyo hadii Shirakado ganacsi...
TACSI: Jamaad Axmed Siyaad oo ku geeriyootay Minnesota
Inaa Lillaahi wa inaa Ilayhi raajicuun. Bahda SomaliTalk.com waxay tacsi u dirayaan dhammaan qoyskii iyo qaraabadii ay ka geeriyootay marxuumad Jamaad Axmed Siyaad oo Isniin (April 27, 2015) ku geeriyootay Minneapolis. Allah ha u naxariisto oo janadii haka waraabiyo Waxaan si gaar ah tacsida ugu direynaa Inj. Maxamed Cali Cibaar oo ay marxuumaddu hooyo u ahayd iyo dhammaan qoyska reer Cali Cibaar....